Irana: ho fiarovana ireo Baha’i vitsy an’isa · Global Voices teny Malagasy
Irana: ho fiarovana ireo Baha’i vitsy an'isa
Voadika ny 09 Mey 2009 16:17 GMT
Voatsindry hazo lena hatramin’izay ireo Baha’i vitsy an'isa, ary hita ho toa miharatsy izany toe-javatra izany. Tsy ela akory izay dia niampanga mpitarika fito tao amin’ny sampam-pitsikilovana Baha'i ny manampahefana Iraniana. Ireo Baha’i ihany no miteny fa anaovana antsojay izy ireo noho ny finoana arahany.
Tamin'ny volana lasa iny dia vondrona Akademisiana iray, mpanoratra, mpanakanto, mpanao gazety sy Iraniana mafana fo maro maneran-tany no nanoratra taratasy misokatra ho an'ireo fikambanana relijiozy Baha'í manao hoe: leo sy menatra ny famoretana efa ho zato taona sy sasany izahay!
Naelin’ny blaogy Persecution of Baha’I of Iran (Famoretana ny Baha'i ao Irana) ny taratasin’ireo Vondrona Iraisam-pirenena Baha’i izay nomena ny sefon’ny herim-pamoretana Iranianina:
“Rehefa nitohy tsy niato ny fandevilevena sy ny fampijaliana ireo Baha'i nandritra ity vanim-potoana ity, dia nahazo sehatra vaovao sy ambonimbony kokoa izy ireo taona maro teo ho eo izao, noho ireo singa maro novahàna tamin'ny alàlan'ny fandravàna ny vondrom-piarahamonina Baha'i nànana fiantraikany bebe kokoa teo amin'ny raharaham-pirenena ” hoy ny voalazan’ny vondrona Iraisam-pirenena Baha’i ho amin’ny fifandraisana.
Nitondra fanamarihana izy hoe ho valin’ity famoretana ity ihany no nametrahana komity vonjimaika hanao dinik'asa mba “handinika ny filàna ara-panahy sy ara-tsosialin” ireo Baha'i miisa300 000 ao Irana – ary efa 20 taona mahery izao no niasan’ny governemanta tao anatin’izany rafitra izany.”
Manome tetiandro ho antsika amin’ny antsipirihany i MidEast Youth izay manome tahirin-kevitra momba ireo fanosihosena natao tamin'ny Baha'ï tato anatin'ny 30 taona farany, manomboka amin'ny famonoana ho faty, ny fisamborana, ny fandroahana sy ny fanimbazimbana zava-masina. Izany dia “tamberin'ireo faharavàna nentin'ny fahanginana nanoloana ireo fanosihosena goavana ny zon'olombelona.”
Fampijaliana ireo Bahai tao Iran ao anatin’ny ngidy
Zarain’ I PejvakZedanyan ny tantaran'i Mr. Shayan Moghy, mpianatra maranin-tsaina iray tsy navela hanohy ny fianarany intsony teny amin’ny anjerimanontolo rehefa nahavita taona iray monja noho ny finoana arahany.
Tanora mpianatra Baha’i iray tsy navela hanohy fianarana teny amin'ny anjerimanontolo no mizara ny fihetsem-pony momba ny fanavakavahana. Hoy ilay mpitoraka blaogy manoratra:
Dia ho eto marina tokoa ve no ho fiafàran'ny tantaram-pianarako? Tanora Baha'i iray tsy afaka mànana ny fahafahana mianatra toy ireo an'arivony maro hafa ve aho ?… Satria ve hafa ny finoana arahako, dia midika izany fa tsy afaka manohy ny fianarako ato anatin’ny fireneko aho?